निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यासमा पर्यटनमन्त्री ढकाललाई किन छैन हतारो ?
बुधबार, असार २ २०७८ ०७:५७ PM
काठमाडौं । २०७६ साउन १५ गते नियुक्त भएका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेकै भोलिपल्ट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
उनले मंसिरभित्र विमानस्थलको शिलान्यासमा १ वटा इँटा राखेर भए पनि गर्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिए । त्यति मात्र होइन, उनी आफै विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको अवलोकनका लागि समेत गए ।
विडम्बना उनले त्यो विमानस्थल शिलान्यास गर्न पाएनन् । मंसिरभित्र गर्ने भनेर हल्ला गरिए पनि उनी एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल मन्त्री हुँदासमेत शिलान्यासको कुनै तयारी गरेनन् । प्राधिकरणले पनि शिलान्यासको कुनै तयारी नभएको र मन्त्रीले बोलेको मात्र भन्दै आएको थियो ।
रूख काट्ने टुंगो र लगानीको टुंगो नै नभई मन्त्री भट्टराईले शिलान्यासको हतारो गरेको भन्दै त्यो बेला उनको आलोचनासमेत भएको थियो । केही वातावरण विदहरूले सार्वजनिक रूपमै विमानस्थल निर्माणको विरोध गरे । रूख मासेर विमानस्थल बनाउनुभन्दा अन्य विकल्प सोच्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
शिलान्यासको हतारो गर्ने मन्त्रीमा उनी मात्र होइन, यसअघि हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका स्व. रवीन्द्र अधिकारीसमेत हुन् । अहिलेसम्म सो विमानस्थलको कुनै तयारी भएको छैन ।
अधिकांश पर्यटन मन्त्रीहरूले नियुक्त लगत्तै निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर, केही महिनाअघि मात्र पर्यटनमन्त्री बनेका भानुभक्त ढकालले भने विमानस्थलको शिलान्यास र निर्माणको विषयमा बोलेका छैनन् । उनले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरे पनि अहिलेसम्म गरिएको हल्लाहरू हल्लामा मात्र सीमित भएको र धेरै कामहरू बाँकी रहेकाले तत्कालै शिलान्यास हुन सम्भावना देखेका छैनन् । आफ्ना निकटहरूलाई मन्त्री ढकालले भनेका छन्, अहिलेसम्म त्यहाँका भुमाफियाहरूले विगतका मन्त्रीरूलाई प्रभावमा पारेर जग्गाको भाउ बढाउनकै लागि शिलान्यास र निर्माणको हल्ला फिजाएको रहेछ ।
विमानस्थल निर्माणमा आफ्नो पनि पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै पहिला त्यहाँको आवश्यक तयारी पूरा गरेर मात्र शिलान्यासका लागि तयारी गर्ने उनले बताएका छन् । तत्कालीन चर्चाका लागिभन्दा दिगो विकासका लागि आफ्नो जोड रहेको उनले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि उनले अहिलेसम्म सो विमानस्थल कहिलेबाट निर्माण हुन्छ भन्ने सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका छैनन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निर्माण गर्ने भनिएको सो विमानस्थलको चर्चा सुरु भएको २५ वर्ष पुगिसकेको छ । निजगढलाई छिमेकका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने भनिएको छ । विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ८ हजार हेक्टर भए पनि विमानस्थलका लागि २ हजार हेक्टर मात्रै प्रयोग गरिने जनाएको छ ।
विमानस्थलमा कुल ३ हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । वार्षिक रूपमा ६ करोड यात्रुको चाप धान्ने गरी विमानस्थल बनाउने भनिएको छ ।
नवनियुक्त वनमन्त्री प्रेम आलेले पत्रकार सम्मेलन गरेर निजगढ विमानस्थलको लगानीको सुनिश्चितता नभएसम्म रूख काट्न नदिने जानकारी गराइसकेको छ । ठूला, साना र मझौला गरी झण्डै २४ लाख रूख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आइतबार​ ९ फागुन २०७७ १२:५६ PM मा प्रकाशित
पहिला सबैलाई खोप, त्यसपछि पर्यटन
वायुसेवा निगमले किस्ता नबुझाएपछि सञ्चय कोष पुग्यो अर्थ मन्त्रालय, पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय, बढ्दै जोखिम
हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने तयारी, ३७ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने
साँगामा ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’ बनाउँदै हिल्टेक ग्रुप, चारतारे होटल तयार हुँदै
टी हाउसबाट सुरु भएको क्लब हिमालय, जसले नगरकोटको परिचयनै बदल्यो
भूकम्पले जन्मिएको ‘हाम्रो टिम नेपाल’, जसले कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क बाँडिरहेको छ अक्सिजन
रमण कन्ट्रक्सन जसले उठायो धरहरा
पर्यटनमा स्वरुप फेरिँदै, घुमन्ते नेपालीलाई लोभ्याउन साहसिक खेलमा अर्बौंको लगानी
ड्रिम प्यालेस:सेलिब्रेटीदेखि कर्पोरेट हाउसको रोजाइमा बिट्रिस शैलीको दरबार